बिहेको आश्वासन दिएर प्रेमिकाको सामूहिक बलात्कार | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ७ श्रावण २०७६, मंगलवार १२:२३ लेखक Sabita Roka
बर्दिया — सँगै बाँच्ने–मर्ने वाचा गरेका प्रेमीले साथीलाई बोलाएर प्रेमिकाको सामूहिक बलात्कार गरेका छन् । बढैयाताल गाउँपालिका—८ पशुपतिबजार देखि २ सय मिटर दक्षिणमा प्रेमीको घरमा १८ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएकाे प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले सामूहिक बलात्कारका अभियोगी सोही ठाउॅका २४ वर्षीय अशोक सुनार र २२ वर्षीय श्रीधर थापालाई पक्राउ गरेको छ। ती किशोरीलाई विवाह गर्ने भन्दैघरमैसाथीसहित पालैपालो बलात्कार गरेको प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण वलीले बताए।
सुनारका बाबु अर्को विवाह गरि अन्यत्र बस्दै आएका थिए भने आमा विदेशमा रोजागारी गर्न गएकी छिन्। सुनार घरमा एक्लै बस्दै आएका थिए। उनले विवाह गर्छु भनेपछि ती किशोरी घर छाडेर आएकी थिइन्।‘किशोरीलाई दुईवटा कोठामा पालैपालो बलात्कार गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ,’ प्रहरी निरीक्षक वलीले भने, ‘साथीलाई यौन सम्पर्क गर्न दिए विवाह गर्ने भनेर बाध्य गराएको देखिन्छ।’
बलात्कार भएको भोलिपल्ट विहे पछि गर्छु अहिले घर जाउ भनेपछि किशोरी रुन थालेपछि प्रहरीलाई जानकारीभएकाे थियाे। सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा सुनार र थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुवैजनाविरुद्ध सामूहिक बलात्कारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको प्रहरी निरीक्षक वलीले बताए।
मन्त्रीले अन्धाधुन्ध पैसा बाँडे
काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विभिन्न सस्ंस्था र प्रतिष्ठानलाई ६० करोड रुपैयाँ बाँडेका…
कालिकोटका ग्रामीण क्षेत्रमा चामलको हाहाकार
कालिकोट । दसैं–तिहार नजिकिँदै गर्दा कालिकोटका ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्यान्नको हाहाकार भएको छ । सदरमुकामस्थित डिपोमा प्रशस्त चामल रहे पनि गाउँमा…
काठमाडौ । सैनिक अदालतले हेर्दै आएको यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा अब नियमित अदालतले हेर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभाले नेपालको…
काठमाडौं । अवकाशको मुखमा पुगेका नेपाल प्रहरीका अधिकांश अधिकारीहरुको क्रसर र टिपरमा लगानी रहेको तथ्य खुलेको छ ।…
वित्तीय पक्ष राम्रो छ । सहयोगीहरू पनि टाढिन सक्छन् ।…
पार्टीका भोटरहरु चुकचुकाउन थाले ?
दुईवटा पार्टी एमाले र माओवादी मिलेर प्रदेश र संघिय संसदको चुनावमा भाग लिए । दुई पार्टीको संयुक्त चुनावी मोर्चाले…
साला फेसबुक !! 169 views